Erdoğan Oo Sheegay In Uu Qatar Garab Taaganyahay – Goobjoog News
Wadahadalka labada mas’uul ayaa ku soo beegantay xilli ay cirka isku sii shareereyso xiisadda ka dhextaagan dowladda Qatar iyo qaar ka mida dowladaha carabta.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ayaa hogaamiyaasha dowladaha Khaliijka u soo bandhigay inuu diyaar u yahay ka qeyb qaadashada xal nabadeed oo lagu dhex dhexaadinayo xiisadda ka taagan qaar ka mida dowladaha Khliijka.
Dhanka kale Madaxweyne Erdogan ayaa dhiggiisa madaxweynaha Ruushka waxa uu kala hadlay sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada ka taagan Khaliijka iyo waddooyinkii looga gudbi lahaa dhibaatooyinkaas, waxayna isku af-garteen labada mas’uul in wadahadal loo furo dowladda Qatar iyo dowladaha xiriirka u jaray.
Dowladaha Sacuudi Carabiya, Imaaradka, Baxreyn iyo Masar ayaa isniintii xiriirka ay u jaray dowladda Qatar iyagoo dalbaday in safiirada Qatar ay iskaga baxaan dalalkooda .
Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlay khilaafka kala dhaxeeya Ra’iisul wasaare Cabdiweli (Dhageyso)
Musharraxiinta Jubbaland Oo Maanta Khudbado Jeedin Doona
Npwgdn gzshbh generic cialis 2020 price of cialis
bluebird cbd oil: best quality cbd oil for sale...